Filoha Nyusi: manavao ny sehatry ny fizahantany i Mozambika hisarika ny mpampiasa vola
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Mozambika » Filoha Nyusi: manavao ny sehatry ny fizahantany i Mozambika hisarika ny mpampiasa vola
Ny filoham-pirenena Mozambika Filipe Nyusi dia nilaza tamin'ny kabariny tamin'ny kabary fanokafana tamin'ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany miorina amin'ny natiora, fa nanatanteraka fanavaozana kendrena hanovana ny sehatry ny fizahantany ny governemantany ary hampitombo ny fangatahana ataon'ireo mpampiasa vola.
Ny fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany miorina amin'ny natiora izay naharitra voalohany tao Maputo izay naharitra telo andro dia nampivondrona ireo tompon'andraikitra sy mpikambana ao amin'ny andrim-panjakana manerantany.
Nilaza i Nyusi fa ny governemanta Mozambika dia nandray fepetra hanatsarana ny tontolon'ny fandraharahana sy hanamafisana ny laharam-pizoran'ny fizahan-tany, ao anatin'izany ny fahazoana visa mora kokoa, ny famerenana amin'ny laoniny ireo tahiry nasionaly ary ny serivisy fizahantany tsara kokoa.
“Ny governemanta dia manafoana ireo fomba fanao maloto sy birao izay manakana ny fampiasam-bola. Nanafaka ny habakabaka nasionaly ho an'ny sidina iraisam-pirenena isika, izay mamela azy ireo hisidina avy any amin'ny fireneny mahitsy mankany Mozambika, ”hoy ny filoha nanampy.
Raha ny filazan'ny filoham-pirenena dia mitombo ny sehatry ny fizahan-tany ary mampiasa olona mihoatra ny 60,000 ankehitriny, miaraka amin'ny anjara biriky lehibe amin'ny harin-karena faobe ao amin'ny firenena.
Miaraka amin'ny 25 isan-jaton'ny faritany iadidian'ny faritra fiarovana, i Mozambika dia mihevitra ny fizahantany ho iray amin'ireo laharam-pahamehana stratejika efatra. Ny telo hafa dia ny fambolena, angovo ary fotodrafitrasa.
Mozambika dia firenena afrikanina atsimo izay ny morontsiraky ny Ranomasimbe Indianina dia feno torapasika malaza toa an'i Tofo, ary koa valan-dranomasina an-dranomasina. Ao amin'ny Nosin'i Quirimbas, 250km nosy haran-dranomasina, Ivo Island rakotra ala honko dia misy rava tamin'ny andron'ny fanjanahantany velona tamin'ny vanim-potoana nanjakan'ny Portiogey. Ny Vondronosy Bazaruto lavitra atsimo dia misy vatohara izay miaro ny fiainana an-dranomasina tsy fahita ao anatin'izany ny dugong.
Ny fiteny ofisialin'i Mozambika dia Portiogey, izay ampiasain'ny antsasaky ny mponina amin'ny ankapobeny ho fiteny faharoa. Ny fiteny zanatany mahazatra dia misy ny Makhuwa, Sena, ary Swahili. Ny isam-ponina ao amin'ny firenena manodidina ny 29 tapitrisa dia olona Bantu no betsaka. Ny fivavahana lehibe indrindra any Mozambika dia ny Kristianisma, miaraka amin'ireo vitsy an'isa manandanja manaraka ny finoana Silamo sy ny fomban-drazana Afrikana. Mozambika dia mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana, ny Vondrona Afrikanina, ny Commonwealth of Nations, ny Organisation of the Islamic Cooperation, the Community of Portuguese Language Countries, the Non-Aligned Movement and the South Africa Development Community, ary mpandinika ao amin'ny La Francophonie.
Nofoanana ny fandraràna ny dia: Israel dia mamela ny Indoneziana hatramin'ny 26 Jona
Fizahan-tany EXPO Japan 2018 dia nanambara ireo mpitarika ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ho an'ny kabary fototra